Ndị na-ahụ maka akụ na ụba na-adọ aka na ntị banyere mmụba na ọnụahịa ngwaahịa Apple n'ihi usoro US | Esi m mac
Na nhoputa ndi ochichi gara aga na ochichi nke United States, enwere okwu mgbe nile banyere a ụtụ mbubata rụrụ nke US Nke a ga-emetụta ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ, ebe ọ bụ na isi ụlọ ọrụ ha dị na mpaghara Eshia. Na mbu, Trump kwuru maka tarifu 45% na ngwaahịa ndị si Eshia na 35% na ngwaahịa ndị si na Mexico.
Kemgbe ahụ ndị ọrụ nchịkwa America na ụlọ ọrụ teknụzụ abịaruola ọnọdụ. N'aka nke aka, ogige ụlọ omebe iwu Donald Trump belatara ma ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka teknụzụ na-eme atụmatụ iji mepụta akụkụ ihe ndị dị na United States.
Eziokwu nke taa na-ekwu maka ụtụ isi 10% maka ngwaahịa a na-ebubata. Ndị ọchụnta ego na -enyocha ihe mmetụta ga -adị na ngwaahịa Apple rere.
Este akụkọ a chịkọtara na magazin The Mercury News. Dị ka akaebe onye nkụzi ahụ nyere ya John vande vate, nke sitere na Georgia Institute of Technology na-egosi: «Mụ na gị ga-akwụ ụgwọ ya» n'ihe metụtara ọnụego a tụrụ anya ya.
N'aka nke ọzọ Ogbonnia Okoronkwo, Onye isi oche ndị isi na Peterson Institute for International Economics, kpọrọ usoro ahụ "Ezigbo ọdachi". Noland bụ onye ji ịnụ ọkụ n'obi na-akwado azụmaahịa efu ma kwenye na agha azụmaahịa na-ewute ndị niile:
A ahia agha malitere na ngwaahịa overruns… nwere ike iduga esemokwu banyere visa na mbata na ọpụpụ mbipụta, nke ga-emerụ dum elu-tech mpaghara.
Ma Renee Bowen, sitere na Mahadum Stanford Business a ma ama, na-ekwu na ụtụ isi nke ịdị ukwuu a abụghị naanị teknụzụ, kamakwa mmekọrịta azụmahịa niile.
Ọ bụrụ na anyị kpebie ịkwụ ụgwọ ọnụahịa ma ọ bụ ihe mgbochi ịzụ ahịa na ndị mmekọ anyị na-azụ ahịa, anyị kwesịrị ịtụ anya mmeghachi omume, nke n'ezie adịghị mma maka ọrụ anyị na ọ dịghị mma maka ọnụahịa… nke ga-eweta ọdịda.
Agbanyeghị, enwere ndị prọfesọ kwenyere na tarifu 20% ga-eme ka ego ndị ahịa America zụta maka ngwaahịa mba, yana ịkwalite ọrụ na ala America. N'ime ahịrị a ị ga-ahụ Steven Calabresi, site na Mahadum Northwestern.
Apple na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na nkà na ụzụ, Ha na-amuta atumatu niile ka ha ghara imetụta uto nke ụtụ isi na ngwaahịa ma obu opekata mpe belata mmetụta ha o kwere mee..
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ndị na-ahụ maka akụ na ụba na-adọ aka na ntị banyere mmụba nke ọnụahịa ngwaahịa Apple n'ihi usoro US.
Apple wepụtara beta 5 ọhụrụ maka tvOS 10.2 na watchOS 3.2